नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : पूर्व- पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सर्लाहीस्थित फुलजोर खोलाको पुलबाट बस खस्दा ४ जनाको मृत्यु भएको छ भने २५ जनाभन्दा बढी घाइते
पूर्व- पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सर्लाहीस्थित फुलजोर खोलाको पुलबाट बस खस्दा ४ जनाको मृत्यु भएको छ भने २५ जनाभन्दा बढी घाइते
सर्लाही / पूर्व- पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत सर्लाहीस्थित फुलजोर खोलाको पुलबाट बस खस्दा ४ जनाको मृत्यु भएको छ भने २५ जनाभन्दा बढी घाइते भएका छन् ।मृतक ४ जनाको शव पोस्टमार्टमका लागि मलंगवा पठाइएको र घाइतेहरूको लालबन्दी र रानीगंजस्थित स्वास्थ्य केन्द्रमा उपचार भइरहेको छ ।
वीरगंजबाट जनकपुरतर्फ जाँदै गरेको ना४ख ८५५५ नम्बरको यात्रुवाहक बस पुलबाट तल खसेको हो ।
तत्काल घाइतेको उद्धार गरी उपचार गराउनुपर्ने भएकाले मृतक र घाइतेको यकिन विवरण केहीपछि मात्र आउने प्रहरीले जनाएको छ । बस अगाडीको चक्का पड्किएर अनियन्त्रित भई पुलबाट तल खसेको बताए पनि अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । सबै मृतक तथा घाइतेहरूको पहिचान समेत खुलिसकेको छैन ।
स्याङ्जा गल्याङ नगरपालिका १ नब्बेमा दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ । वालिङबाट बुटवलतर्फ जाँदै गरेको ग१५प ७४४७ नं. को मोटरसाइकल र विपरीत दिशाबाट आइरहेको लु२ख ५२९० नं. को फोर्स कम्पनीको गाडी आज एक–आपसमा ठक्कर खाँदा मोटरसाइकल चालक जितेन्द्र पटेलको मृत्यु भएको हो ।
रुपन्देहीको शुद्धोदन गाउँपालिका ५ फर्सटिकट घर भई गल्याङ बजारमा कुशल मोटरसाइकल वर्कसपमा” काम गर्ने बर्ष २७ को जितेन्द्र पटेलको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाका प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्रप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
दुर्घटनामा पुरी घाइते भएका पटेललाई गल्याङ अस्पतालमा लगिएकोमा उनलाई डाक्टरले मृत घोषणा गरेका थिए ।
दुवै सवारी साधन र सवारी चालक अहिले प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका छन् । घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।